Aqriso: Muudey iyo Cawad oo soo saaray 7 qodob oo lagu wiiqay awoodii Mursal - Caasimada Online
Home Warar Aqriso: Muudey iyo Cawad oo soo saaray 7 qodob oo lagu wiiqay...
Aqriso: Muudey iyo Cawad oo soo saaray 7 qodob oo lagu wiiqay awoodii Mursal
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiye ku xigeenka koowaad iyo kan labaad ee Golaha shacabka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray habka uu u shaqeynayo baarlamaanka inta lagu jiro kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed ee hadda dalka ka jira.
Go’aanka Mahad Cawad iyo Muudeey ayaa u muuqda mid lagu go’doomiyey laguna wiiqay awooddii guddoomiyaha baarlamanka Maxamed Mursal cabdiraxmaan.
Mahad Cabdalla Cawad oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in ay todobo kodob ka soo saareen habka shaqada ee shaqaalaha Baarlamaanka iyo Xarunta Villa Hargeysa ee ay ku shiraan Guddiyada joogtada ah.
Mahad, waxaa uu sheegay in hoolka Villa Hargeysa aan lagu qaban karin kulamo siyaasadeed islamarkaana shaqaalaha looga baahanyahay kaliya in ay ku shaqeeyaan.
In Guddigii Maaliyadda ee la kala diray ay sidoodii yihiin, islamarkaana aan la aqoonsaneyn, waxaana uu guddoomiye Mursal ugu baaqay in go’aankiisii soo celinta Guddiga uu aysan ahayn mid sharciga waafaqsan.
Shaqaalaha Golaha Shacabka ayuu sheegay in aysan fulin karin go’aanno maaliyadeed oo uusan u dhameyn Guddoonka Golaha shacabka iyo qodobo kale.
Wali waxaa magaalada Muqdisho ka jira xiisadda ka dhalatay Mooshinka qaar ka mid ah Golaha shacabka ay ka gudbiyeen Madaxeyne Farmaajo.
Hoos ka daawo Cawad